Karazan’olona Manao Ahoana Aho? | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tongan Tseky Tsonga Vietnamianina Zoloa
Karazan’olona Manao Ahoana Aho?
Iny i Fetra fa tamy. Mampahatahotra an’i Davida ny zavatra hitranga. Hoy i Fetra: “Ity ny an’ialahy Ra-Davy a!” Nosokafan’i Fetra ny tanany ary io tokoa fa rongony no tao. Tsy te handray an’ilay izy i Davida nefa menatra ny handa koa. Nihanahana kely i Davida nilaza hoe: “Aleo leisy amin’ny manaraka a!”
Iny i Fetra fa tamy. Efa vonona ny amin’izay hitranga i Farasoa. Hoy i Fetra: “Ity ny an-dry ry Fara a!” Nosokafan’i Fetra ny tanany ary io tokoa fa rongony no tao. Hoy i Farasoa: “Misy zava-dehibe tiako hatao amin’ny hoavy ary tokony ho salama aho mba hanaovako an’izany. Noheveriko fa mba misaina ihany ianao ity, hay mifoka an’ireny!”
NAHOANA i Farasoa no nahay namaly kokoa an’i Fetra? Nisy zavatra tsy nitovizany tamin’i Davida. Fantany tsara izay tiany hatao sy izay hevitra ijoroany. Hahatohitra fakam-panahy koa ianao raha mahafantatra an’izay tianao hatao sy ny hevitra ijoroanao. Ianao ihany, amin’izay, no hifehy ny fiainanao fa tsy ny hafa. Inona no hanampy anao hatoky tena toy izany? Valio aloha ireto fanontaniana ireto.
1 INONA AVY NY ZAVATRA HAIKO SY NY TOETRA TSARAKO?
Ilaina fantarina izany satria hanampy anao hatoky tena kokoa.
Diniho izao: Samy manana ny talentany ny olona, ohatra hoe mahay zavakanto na mozika na havanana amin’ny fanatanjahan-tena. Tena mahay manamboatra fiara, ohatra, i Anja. * Hoy izy: “Hitako hoe te ho lasa mpanamboatra fiara aho, tamin’izaho 15 taona teo ho eo.”
Ohatra ara-baiboly: Hoy ny apostoly Paoly: “Na tsy mahay aza aho eo amin’ny fitenenana, dia tsy mba toy izany eo amin’ny fahalalana.” (2 Korintianina 11:6) Nahalala tsara ny Soratra Masina i Paoly ka afaka nijoro tamin’ny heviny rehefa nisy nanohitra. Tsy niovaova hevitra izy na dia nisy nanakivy aza.—2 Korintianina 10:10; 11:5.
Mandiniha tena. Soraty eto izay talenta na fahaizana anananao.
Soraty eto koa ny toetra tsara anananao. (Ohatra hoe tsara fanahy, malala-tanana, azo ianteherana, marim-potoana)
“Miezaka aho mba ho afaka hanampy ny hafa foana. Raha misy olona te hiresaka amiko nefa mbola manao zavatra aho, dia hajanoko ilay izy ary mihaino azy aho.”—Brianne.
Sarotra aminao ve ny mahita ny toetra tsaranao? Eritrereto àry izay toetranao nihatsara rehefa nihalehibe ianao, ary soraty eto izany.—Jereo, ohatra, ilay efajoro hoe “Ny Hevitry ny Tanora toa Anao.”
2 INONA AVY NY FAHALEMEKO?
Ilaina fantarina izany satria hanimba anao ny fahalemenao raha avelanao hisy fiantraikany be eo aminao.
Diniho izao: Tsy misy olona lavorary. (Romanina 3:23) Samy manana toetra mila ovana ny tsirairay. Hoy ny ankizivavy iray atao hoe Nivo: “Maninona koa àry aho no kizitina amin-javatra tsy misy dikany! Zavatra kely dia mahatezitra ahy, ka tsy mahafehy tena aho.”
Ohatra ara-baiboly: Nahafantatra ny fahalemeny i Paoly. Hoy izy: “Tena mahafinaritra ahy ny lalàn’Andriamanitra, araka ny toetra maha izy ahy, nefa ao amin’ny vatako dia ahitako lalàna hafa miady amin’ny lalàn’ny saiko sady mitondra ahy ho babon’ny lalàn’ny ota.”—Romanina 7:22, 23.
Mandiniha tena. Inona ny fahalemena hitanao hoe tokony horesenao?
“Tsapako hoe isaky ny avy mijery tantaram-pitiavana aho, dia malahelohelo ary te hanana olon-tiana. Hitako izao fa mila mitandrintandrina amin’ireny tantara ireny aho.”—Bridget.
“Rehefa nihalehibe aho, dia nianatra nandinika tsara ny tsipiriany rehetra, alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra, na kely izany na lehibe. Ataoko koa izay tsy hahatafiditra ahy amin-javatra tsy mampifaly an’Andriamanitra.”
“Nihevitra aho tamin’ny mbola kely fa hafahafa izay olona tsy mitovy amiko. Hitako anefa izao fa tsy mitovy ny olona, ary lasa mahaliana ahy ny fomba fihevitry ny hafa.”
3 INONA AVY NY TANJOKO?
Ilaina fantarina izany mba tsy hanaovana zavatra an-jambany fotsiny. Hohalavirinao koa izay olona sy toe-javatra mety hanakana anao tsy hanatratra an’ilay tanjonao, raha fantatrao tsara izay tianao hatao.
Diniho izao: Ahoana raha misy olona mandray taxi ary miteny amin’ilay mpamily mba hihodinkodina manodidina ny tranobe iray, mandra-pahalanin’ny lasantsiny? Ho hadalana izany sady handany vola. Tsy hihodinkodina fotsiny hoatr’izany ianao, raha manana tanjona, fa hahafantatra tsara an’izay tianao hatao sy ny fomba hahavitana an’izany.
Ohatra ara-baiboly: Hoy i Paoly: “Rehefa mihazakazaka aho, dia tsy mihazakazaka befahatany fotsiny.” (1 Korintianina 9:26) Nanana tanjona i Paoly ary niezaka nanatratra izany, fa tsy nipetra-potsiny niandry izay hitranga.—Filipianina 3:12-14.
Mandiniha tena. Soraty ny tanjona telo tianao hotratrarina amin’ny taona ho avy.
Iza amin’ireo no zava-dehibe indrindra aminao? Soraty eto izay azonao atao dieny izao mba hanatratrarana azy.
“Lasa mivenjivenjy fotsiny aho raha vao tsy manao zavatra. Aleo ihany manana tanjona sy miezaka manatratra an’izany.”—José.
4 INONA AVY NY HEVITRA IJOROAKO?
Ilaina fantarina izany mba tsy hahatonga anao hiovaova hevitra. Ho toy ny tanalahy miovaova loko ianao raha miezaka hitovy amin’ny namanao fotsiny. Ho hita amin’izany fa tsy manana ny maha ianao anao ianao.
Diniho izao: Ampirisihin’ny Baiboly ny Kristianina ‘mba handinika tsara ka hamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, izay tsara sady ankasitrahana no tonga lafatra.’ (Romanina 12:2) Tsy hiovaova hevitra mihitsy ianao na inona na inona ataon’ny hafa, raha manao zavatra mifanaraka amin’ny hevitra ijoroanao.
Ohatra ara-baiboly: “Tapa-kevitra tao am-pony” ny hankatò ny lalàn’Andriamanitra i Daniela, tamin’izy tanora, na dia lavitry ny fianakaviany sy ny mpiara-mivavaka taminy aza. (Daniela 1:8) Tsy niovaova hevitra mihitsy àry izy, ary nanao zavatra nifanaraka tamin’ny hevitra nijoroany.
Mandiniha tena. Inona avy ny hevitra ijoroanao? Diniho, ohatra, ireto:
Mino an’Andriamanitra ve ianao? Nahoana? Inona no mahatonga anao hiaiky hoe misy izy?
Mino ve ianao fa mahasoa anao ny fitsipik’Andriamanitra momba ny fitondran-tena? Nahoana? Inona, ohatra, no mahatonga anao hiaiky fa ho sambatra ianao raha mankatò ny fitsipik’Andriamanitra momba ny firaisana, fa tsy maka tahaka an’ireo namanao manao izay tiany fotsiny?
Tsy tokony hovaliana maimaika ireo fanontaniana ireo. Makà fotoana kosa mba handinihana ny antony inoanao zavatra iray. Ho vitanao kokoa, amin’izay, ny hiaro ny finoanao.—Ohabolana 14:15; 1 Petera 3:15.
“Hohararaotin’ny ankizy any am-pianarana ianao raha tsy tena atokisanao ny zavatra inoanao. Tsy tiako ny ho toy izany, ka nataoko izay hiekena tanteraka hoe tena marina ny zavatra inoako. Tsy miteny amin’ny olona aho hoe tsy mahazo manao zavatra iray satria tsy mety amin’ny fivavahako izany. Tsy ataoko kosa ilay izy satria tsy mety amiko. Izay ny zavatra inoako.”—Danielle.
Karazan’olona manao ahoana àry ianao? Toy ny ravinkazo mora tsofin’izao rivotra malefaka rehetra izao, sa toy ny hazo mahatanty rivo-mahery? Hamaka tsara toa an’ilay hazo ianao raha mijoro tsara amin’ny hevitrao. Ho fantatrao amin’izay hoe karazan’olona manao ahoana ianao.
Ho toy ny hazo mamaka tsara sy mahatanty rivo-mahery ianao, raha mijoro amin’ny hevitrao
^ feh. 8 Novana ny anarana sasany ato.
Inona no hitanareo hoe talenta ananako? Ary inona no toetrako hitanareo hoe mbola tokony hohatsaraiko? Inona no nahatonga anareo hiaiky fa marina ny fitsipik’Andriamanitra?
Hizara Hizara Karazan’olona Manao Ahoana Aho?
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Oktobra 2011
Hizara Hizara MIFOHAZA! Oktobra 2011
MIFOHAZA! Oktobra 2011